sanmaungmanug - nitikiti
San Maung Manug
( ဒီ homepage မှာ ကြော်ငြာချင်တယ်ဆိုရင် တစ်လ ၃၀၀၀၀ ကျပ်ကျမည် )
စန်းမောင်မောင်ဆိုသူသည် ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့ အတူတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့ ဖူးပါသည် ။ သူ၏ email မှာ cyberexpertgroup@gmail.com ဖြစ်သည် ။
သူသည် Web Hosting လုပ်ငန်းကို လုပ်ချင်တယ် ကူညီပေးပါလို့ ပြောဆိုသဖြင့် အတူတူ အလုပ်လုပ်ကြရန် သဘောတူခဲ့ပါသည် ။
ပထမဆုံး Hosting Account တစ်ခုကို IX Webhosting က ၀ယ်ယူပါသည် ။ ဒီက ၀ယ်ယူလို့ မရသည့် အတွက် Singpore မှာ ရှိသော ကျွန်တော်၏ အစ်မ ဖြစ်သူထံမှ အကူအညီတောင်းခဲ့ပါသည် ။ ကျွန်တော်၏ အစ်မဖြစ်သူ သူငယ်ချင်း၏ Credit Card မှ တဆင့် Domain Name , Hosting တို့ကို ၀ယ်ယူခဲ့ပါသည် ။ Domain Name မှာ www.nextgen-webhosting.com ဖြစ်ပါသည် ။
အားလုံးပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ 85,000 ခန့်ဖြစ်ပါသည် ။ ကုန်ကျငွေအား ကျွန်တော့်ကို ပေးပါသည် ။
အမှန်က Credit Card ပိုင်ရှင်၏ email ကို အသုံးပြုပြီး ၀ယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ စန်းမောင်မောင် နဲ့ ကျွန်တော်က သူငယ်ချင်း ဖြစ်နေတော့ သူရဲ့ email ကို သုံးပြီး ၀ယ်ပေးဖို့ပြောခဲ့တာပါ ။ ဒီမှာ စန်းမောင်မောင်က ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ IX Hosting က ပို့လိုက်သော email မှာ နောင် Domain Name ၀ယ်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ Hosting သက်တမ်းတိုးချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခု လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူက Payment Method မှာ အရင်က ၀ယ်ယူခဲ့ဖူးသော Card မှ ငွေကို ဖြတ်ယူပါရန် dropdown list မှာ ရွေးလိုက်ရင်ရပါတယ် ။ ဒါတွေ ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလည်းဆိုတော့ အခုသူက 2012 အထိ သူ၏ hosting ကို ကျွန်တော့်အားအသိ မပေးဘဲ ၊ ကျွန်တော်၏ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ၊ သူများပိုင် Credit Card ကို အသုံးပြုပြီး သက်တမ်းတိုးလိုက်ပါသည် ။ ကုန်ကျငွေမှာ S$ 500 စင်ကာပူငွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့အား ငွေကြေးတစ်စုံ တစ်ရာ မပေးပါ ။ ဒါဟာ စန်းမောင်မောင် လူလိမ်ကျတာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအချိန်က ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ဖို့ နေရာကို ကျွန်တော်နဲ့သိသော ၊ စန်းမောင်မောင်ဆိုသူ၏ သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်သော ကိုအောင်သန်း၏ Internet Cafe ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည် ။ တခြားနေရာတွင် ရုံးခန်းငှါးရန် ငွေမရှိလို့ပါ ။
ကျွန်တော်က သူနှင့်အတူ နှစ်လခွဲလောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည် ။ ကျွန်တော် လုပ်ရသော အလုပ်မှာ website အတွက် သတင်းများကို ဘာသာပြန်ခြင်း နှင့် တခြား အသေးအဖွဲ ကိစ္စလေးတွေသာ ဖြစ်ပါသည် ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လစာမှာ တစ်လ တစ်သိန်းဖြစ်ပါသည် ။
နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော် ကိုရီးယားသွားဖို့ လုပ်စရာများ ပေါ်လာသောကြောင့် အလုပ်ထွက်ဖို့ဖြစ်လာပါသည် ။
သူလုပ်နေသော website များမှာလည်း တစ်ခုမှ မအောင်မြင်ပါ ။ သူသည် စိတ်အပြောင်းအလဲ အရမ်းမြန်ပါသည် ။ အခုလုပ်ချင်တယ် ပြောပြီး ထလုပ်ပါသည် ။ အလုပ်ကို ပြီးဆုံးအောင် မလုပ်ခဲ့ပါ ။ တ၀က်တပျက်မှာတင် အလုပ်ကို ရပ်ထားခဲ့ပါသည် ။
သူအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ငွေကို သူများထံမှ လိုက်ချေးငှားပါသည် ။ သူ၏အိမ်မှ ငွေအများကြီးကို မထုတ်ပေးပါဘူး ။ သူပြောတာကတော့ သူ့အစွမ်းအစနဲ့သူ လုပ်ချင်တယ် ပြောတာပဲ ။ ဒါကြောင့် သူသည် သူများငွေကို ငှားယူ ၊ လိမ်ယူ မိပါသည် ။
သူ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကိုအောင်သန်းထံမှ ငွေကို လိုရင် လိုသလို ချေးငှား ယူပါသည် ။ ထို့တွင် ကိုအောင်သန်းက ဖုန်းလိုချင်တယ် ပြောဆိုရာမှ စန်းမောင်မောင်ဖြစ်သူသည် သူ၏မိခင်မှာ နေပြည်တော်တွင် တာဝန်ကျပြီး ဖုန်းလျှောက်ချင်တယ်ဆိုပါက သူလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောဆိုလာပါသည် ။ ၁၆ သိန်းလောက်ကျမည် လို့ပြောပါသည် ။ ကိုအောင်သန်းကလည်း သေချာတယ်ဆိုရင် လုပ်မယ်လို့ပြောပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ဖုန်းလျှောက်ထားရန် အတွက် စန်းမောင်မောင်က ကြိုတင်ငွေပေးထားပါဆိုလို့ ကိုအောင်သန်းမှ ငွေ ၅ သိန်းကျပ်ကို ထုတ်ပေးထားပါသည် ။ ထို့နောက်တွင် ကျွန်တော် အလုပ်က ထွက်သွားခဲ့ပါသည် ။ ကျွန်တော် အလုပ်တွက်သွားခြင်းကို စန်းမောင်မောင်းဆိုသူသည် ကျွန်တော့်ကို တစ်လတစ်သိန်းပေးရပြီး သူ၏အလုပ်များကိုလည်း မကူညီဘဲ ၊ သူ့ကို ပစ်သွားသည့်အတွက် ကျွန်တော့်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့ပါသည် ။
ကျွန်တော်သည် ကိုရီးယားသွားဖို့အတွက် သင်တန်းတက်ပြီး စာမေးပွဲဝင်ဖြေပါသည် ။ စင်ကာပူကို ကွန်ပျူတာနဲ့ သွားဖို့အတွက် KMD မှာ လိုအပ်သော သင်တန်းများကို တက်ပါသည် ။ ကိုအောင်သန်းရဲ့ Intenet Cafe ဆိုင်မှာတော့ မကြာခဏ အင်တာနက် သုံးပါသည် ။ စန်းမောင်မောင် နဲ့ တွေ့ပါသည် ။ စကားမပြောပါ ။ ကျွန်တော်ထွက်မသွားခင်က အလုပ်ခန့်ထားသော ကိုမျိုးမင်းခိုင်နဲ့တော့ တွေ့ပါသည် ။ စကားပြောဖြစ်ပါသည် ။ သူကတော့ စန်းမောင်မောင်နှင့် အတူ အလုပ်တွဲလုပ်နေတုန်းပါ ။
၂ လ ၊ ၃ လ ခန့်အကြာတွင် စန်းမောင်မောင် ဆိုသူသည် ကိုအောင်သန်းဆိုင်မှ ထွက်သွားပြီး ပုဇွန်တောင်ရှိ ချမ်းသာ ပလာဇာတွင် အလုပ်လုပ်ဖို့ ရုံးခန်းပြောင်းသွားပါသည် ။ တစ်နေ့တွင် စန်းမောင်မောင်ဆိုသူသည် ကျွန်တော့်စီ ဖုန်းဆက်ပြီး တွေ့ဖို့ချိန်းပါသည် ။
သူနှင့်တွေ့ပြီး ပြောဆိုရာတွင် သူသည် ကိုအောင်သန်းဆိုင်မှာ မလုပ်ချင်တော့ကြောင်း ၊ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကိုအောင်သန်းက သူလုပ်နေသော အလုပ်မျာကို သဘောကျကြောင်း ၊ ကိုအောင်သန်း၏ ၀င်ငွေမှာ သူ့လောက် မကောင်းပါကြောင်း ၊ အခု ကိုအောင်သန်းက သူ့၏ဆိုင်မှာပင် Web Hosting လုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ကိုဖို့ ကြံစည်နေကြောင်း ၊ သူ၏လူများက ပြောဆိုကြောင်း ၊ ပြီးတော့ တစ်နေရာထဲတွင် လုပ်ငန်းတူနှစ်ခုကို ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်မလဲ စသဖြင်းပြောဆိုပါသည် ။ ထို့နောက် ကျွန်တော့် ကို Skype Account တစ်ခု ဒီနေ့ရအောင် ၀ယ်ပေးရန် အကူအညီ တောင်းပါသည် ။ ဒီ Skype Account သည် ချမ်းသာပလာဇာ ရှိ Glory Hope အပိုင် Internet Cafe ဆိုင်အတွက်လို့ပြောပါသည် ။ ကျွန်တော်သည် သူလိုချင်သော Skype Account ကို ကျွန်တော်၏ အစ်မရဲ့ အကူအညီ ဖြင့် ၀ယ်ယူပေးလိုက်ပါသည် ။ ပိုက်ဆံကို ကျွန်တော့် အစ်မက စိုက်ထားပေးပါသည်။ စန်းမောင်မောင်သည် ကျွန်တော့်အား Skype Account ၀ယ်ယူငွေ 58000 ကို ချက်ချင်းမပေးပါ ။ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်ခန့်အကြာ ကျွန်တော် ဖုန်းခဏ ခဏ ဆက်ပြီးနောက်မှသာ ငွေ ၅၈၀၀၀ ပေးဖို့ ကျွန်တော့်အိမ်ကို ရောက်လာပါသည် ။ sorry လို့ပြောပြီး သူအလုပ်ရှုပ်နေပါကြောင်း ၊ သူအရမ်းကို အဆင်ပြေနေကြောင်း သူနဲ့ အတူ အရင်လို အလုပ်လာလုပ်ပါလား စသဖြင်းပြောပါသည် ။ ပြီးတော့သူသည် ကိုအောင်သန်းဖုန်းလျှောက်ထားတာကျပြီဖြစ်လို့ နေပြည်တော်သို့ သွားရဦးမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောပါသည် ။ ထို့နောက် Skype Account ၀ယ်ယူတဲ့ငွေကို သူရသော အမြတ်မှာ နည်းပါကြောင်းပြောလို့ ကျွန်တော်က ဘာမသိ ညာမသိဖြင့် ငွေ ၈၀၀၀ ကို မယူတော့ဘဲ ငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ်သာ ပေးပါရန် ပြောလိုက်ပါသည် ။
အဲဒိနောက် ကျွန်တော် ကိုအောင်သန်းဆိုင်မှာ အင်တာနက်သွားသုံးတဲ့ တစ်နေ့မှာ စန်းမောင်မောင် ချမ်သာပလာဇာသို့ ပြောင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် ။ ကျွန်တော်သည် ကိုအောင်သန်းနဲ့ တွေ့သောအခါ ကိုအောင်သန်း၏ ဖုန်းကိစ္စကို မေးကြည့်ရာ ကိုအောင်သန်းက ဖုန်းကဒ်ကျလို့ဆိုပြီး ငွေ ၁၁ သိန်း ထပ်မံပေးထားကြောင်း ၊ အခုသူ နေပြည်တော်သို့သွားယူပေးမယ်လို့ပြောကြောင်း ၊ သူသည် ဖုန်းကိစ္စကို အမှန်တကယ် လုပ်ပေးမှာလား ၊ လိမ်လည် နေတာလား စောင့်ကြည့်နေကြောင်းပြောဆိုပါသည် ။
နောက်ဆုံးတွင် ကိုအောင်သန်းသည် စန်းမောင်မောင်ရှိသော ချမ်းသာ ပလာဇာသို့ လိုက်သွားပါသည် ။ စန်းမောင်မောင်နဲ့တွေ့ပြီး ပြောဆိုရာတွင် စန်းမောင်မောင်က ငွေပြန်မပေးနိုင်ကြောင်း ၊ လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်ပါကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့် ကိုအောင်သန်းက ပုဇွန်တောင်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါသည် ။ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားပြီး မကြာခင်တွင် စန်းမောင်မောင်သည် သူ၏ချစ်သူနဲ့ ခိုးပြေးသွားပါသည် ။ ချမ်းသာပလာဇာတွင်လည်း အလုပ်မလုပ်ကိုင်တော့ပါ ။ ပုဇွန်တောင်ရဲစခန်းမှ သူ့အား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပြီး အချိန်မရွေး ဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် ။
အခုသူက ကျွန်တော့်ကိုပါ တိုက်ရိုက် ဒုက္ခပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီမှာ www.whois.com မှာ Domain Name ပိုင်ရှင်၏ အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားပါတယ် ။ nextgen-webhosting လို့ရိုက်ထည့်ပြီး search လုပ်နိုင်ပါတယ် ။
Domain Name : nextgen-webhosting.com
Blk.158, #12-259, Fragrant Wood, Woodlands Drv.14
Singapore, NA 730518
Domain name: NEXTGEN-WEBHOSTING.COM
Maung, San Maung
Record last updated on 16-Jul-2009.
Record expires on 18-Jul-2010.
ဒီမှာ IX Website ရဲ့ Chat Live မှာ ကျွန်တော်နဲ့ ပြောဆိုခဲ့သော စကားများကို ဖော်ပြထားပါတယ် ။
you: can you tell me my status?
Oleg Barannik: Product ID: #467211
Oleg Barannik: Username: nextgen
Oleg Barannik: Status: Active
Oleg Barannik: Billing Profile:
Oleg Barannik: Plan Type: Unlimited Pro
Oleg Barannik: Billing Period: Triennial
Oleg Barannik: Exp. Date: Jul-16-2012
Oleg Barannik: Renewal: Manual
Oleg Barannik: Free Domains:3of3Free Domains Are Available
စန်းမောင်မောင်ဟာ IX Web Hosting မှ Select A Product မှာ Window : Unlimited Pro - UNLIMITED Sites +3Free Domain ၊
Billing Circle မှာ 36 Months Price - $9.95/.m * SPECIAL PROMO ကို ရွေးချယ် ၀ယ်ယူခဲ့ပါသည် ။
Choose An Option Below မှာ Order Hosting With A New Domain, Order Hosting With An Existing Domain , Order Hosting Only တစ်ခုခု ရွေးခဲ့ ပါလိမ့်မယ် ။
Total Cost For These Products $358.20 ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ် ။
Additional Service: Ecommerce SSL 49.95 တခြား service များကို ယူသုံးခဲ့တယ်ဆိုရင် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
လူလိမ်အမည် : စန်းမောင်မောင်
မှတ်ပုံတင်အမှတ် : 12/အလန(နိုင်)041303
လိပ်စာ : အမှတ် c-2 , မိုးကောင်းဝင်း , လျှပ်စစ်အရာရှိရိပ်သာ , အလုံမြို့နယ် ,
ဖုန်း : 01 - 524137
မိခင်အမည် : ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း ( ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ လျှပ်စစ်ဓတ်အားပေးဖြန့်ဖြူးရေးဌာန၊ နေပြည်တော် )
ဖခင် : ဒုက္ခိတ အငြိမ်းစား
ကျွန်တော် Nitikiti သည် စန်းမောင်မောင်ဆိုသူအား တွေ့ရှိပါက ဓားဖြင့်ထိုးမည် ၊ တုတ်ဖြင့်ရိုက်ပါမည် ။
သူ၏နာမည် ၊ email ၊ website လုပ်ငန်းများကို ကွန်ပျူတာ ၊ အင်တာနက်လောက မှာ သုံးစားလို့မရအောင်လုပ်ပါမည် ။
သူ၏မိခင်အလုပ်အကိုင် ရာထူးပြုတ်အောင် သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားပါမည် ။
သူ၏ညီမဖြစ်သူ ဆယ်တန်းအောင်ကာစ ကောင်မလေးကို အရေခွံနွှာမည်ဖြစ်ပါသည် ။
သူ၏ဖခင် ဒုက္ခိတကတော့ အချိန်တန်သေမည် ထားလိုက်ပါတော့ ။
ချစ်သောစာဖတ်သူများ ခင်ဗျား စန်းမောင်မောင်ဆိုသူ လူလိမ်အားတွေ့ရှိပါက ကျွန်တော့်အစား စော်ပလော်တီးပေးကြပါခင်ဗျား ။
3. Hacker's Secret
8. Web Search Tips
10.Gmail's New Features